Shiinaha Mashiinka saarista timaha laser-ka dyede 808nm tayo sare leh DY-DL4 Soosaarka iyo Warshad | Daanye
Mashiinka saarista timaha laser-ka ee laser-ka waa laser-ka soo saara iftiin weyn oo iftiinkiisu aad u sarreeyo. Laydhka leysku si fiican ayuu u nuugaa iyada oo loo yaqaan 'pigment' oo ku taal meelihii timaha. Inta lagu guda jiro howsha, tuubada laser-ka ee cabirka hal sekan, taasoo u oggolaaneysa timaha inay soo nuugaan tamarta isla markaana ay kululaadaan.
Iyada oo xajmi weyn leh, hawshu waxay daaweyneysaa timo fara badan oo isku mar ah, taasoo ka dhigeysa daaweynta mid ka dhaqso badan lPL dhaqameedka iyo waxyaabaha kale ee looga saari karo timaha.
Hore: Barta weyn SR560 HR695 e-light ipl gacan-yaraha qalabka gacan-qabashada
Xiga: CE iyo ROHS waxay ansaxisay diode laser saarista timaha 808 DY-DL8
La qaadan karo 810nm / 808nm Diode Laser Timo dhakhso leh Rem ...